बाथरोगबाट बच्न खानुस् दही, अरुपनि छन् फाइदै फाइदा
कात्तिक १२, २०७६
दही स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै लाभदायक भएकाले यसको नियमित सेवन गर्नु राम्रो मानिन्छ ।
दहीमा भएका पुष्टिकारक तत्वलाई शरीरको पाचन प्रणालीले सजिलै ग्रहण गर्छ । यसले अरू खानेकुराबाट प्राप्त पौष्टिक तत्वलाई पनि शरीरमा पचाउन मद्दत गर्छ । पीरो र मसालादार खानेकुरा खाएपछि उत्पन्न तातोपनालाई दहीले चिस्याउन मद्दत गर्छ ।
मुटु स्वस्थ राख्नका लागि दही लाभदायक हुन्छ । यसको नियमित प्रयोगले उच्च रक्तचापको जोखिम हटाउँछ र मुटुका धमनीलाई बाक्लो हुनबाट रोकेर कोलेस्ट्रोल घटाउँछ ।
दहीमा विद्यमान असल ब्याक्टेरियाले शरीरमा भएका अनेकौं हानिकारक सूक्ष्म कोषिकासँग लडेर शरीरको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमतामा अभिवृद्धि गर्छ । दहीमा हुने फोस्फोरस र क्याल्सियमले दाँत र हाड बलियो बनाउन मद्दत गर्छ । बाथरोगबाट बच्न पनि दहीको सेवन गर्नुपर्छ ।
छाला चम्किलो बनाउन तथा कपालको चायाँ हटाउन दहीले मद्दत गर्छ । यसमा हुने ल्याक्टिक एसिड र एन्टी फंगल प्रपर्टीले चायाँ निर्मूल गराउँछ । तनाव घटाउन समेत दहीले मद्दत गर्छ ।
एक अमेरिकी विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययन अनुसार मानसिक पीडाका लागि जिम्मेवार दिमागी तन्तुलाई निष्क्रिय बनाउन दहीले भूमिका खेल्छ ।
मम खानुहुन्छ ? सावधान, उच्च रक्तचाप हुन सक्छ !
वैज्ञानिक अनुसन्धानको निष्कर्ष - गाईको गहुँतबाट १ स...
रेमिट्यान्सले लय समात्ला? ५ महिनामा ३.७६ खर्ब भित्रियाे
गण्डकीका आर्थिकमन्त्री गुरुङ भन्छन्- ‘उजुरी पर्दैमा भ्रष्टाचार हुँदैन
मूल्यवृद्धिकाे उकालाे यात्रा, काठमाडौँमा सबैभन्दा उच्च ७.६० प्रतिशत
सस्ताेमा खाना खुवाउने लहर: झापामा १० रुपैयाँमै अघाउन्जेल खाना
सेनाले अघि सारेको एकीकरण मार्ग पर्यटनका निम्ति महत्वपूर्ण : उपप्रम पोखरेल
राष्ट्रियसभा चुनावः भोलि मध्यरातिबाट मौन अवधि, फेसबुकमा पनि मत माग्न निषेध